JUNE&MAY: ကိုယ်နဲ့ အသက်အာမခံ
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်တုန်းကပေါ့ အိမ်ရှေ့မှာ TV ကြည့်နေတုန်း GE က insurance ရောင်းတဲ့
ကောင်လေးတွေ တံခါးလာခေါက်ပြီး insurance လာရောင်းတယ်။အမှန်ဆို အဲ့အချိန်က Insurance
ဆိုတာ လုံးဝ စိတ်မ၀င်စားဘူး ၀ယ်လဲဝယ်မထားဘူး။လာရောင်းတဲ့ထဲက ကောင်လေး တစ်ယောက်က
ရှင်းပြပေမယ့် စိတ်မ၀င်စားတော့ ဒီဘက်နားက၀င် ဟိုဘက်က ထွက်ပဲ။မ၀ယ်ဘူးလို့နေပေမယ့် အဲ့တုန်း
က အိမ်မှာ အိမ်ငှားနေတဲ့ အမ က မာမား ၀ယ်သင့်တယ်။၀ယ်လိုက်ပါလားဆိုပြီး တိုက်တွန်းလို့ မ၀ယ်
ချင်ဝယ်ချင်နဲ့ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ၀ယ်ထားခဲ့တာ။မ၀ယ်ချင်တာကလဲ အိမ်ကလူ အလုပ်လုပ်တဲ့ company
က family insurance ရှိတော့ ၀ယ်ဖို့ မလိုဘူးထင်တာလဲပါတယ်။ကိုယ်ဝယ်ပြီး နောက် ၄ လလောက်ကြာ
တော့ အိမ်ကလူလဲ အဲ့ အလုပ်ကနေ ထွက်ဖြစ်မလားဆိုပြီး In-case ဆိုပြီး သူဖို့ နဲ့ ကလေး ၂ယောက်
ဖို့ ထပ်ဝယ်ခဲ့တယ်။၀ယ်ပြီးတော့လဲ ပြစ်ထားလိုက်တာပဲ တစ်ခါမှ Policy စာတွေ ရောက်လာရင် ကိုယ့်
Plan ဟာ ဘာပလန် ဘာတွေ အကြုံးဝင်တယ်ဆိုတာလဲ မဖတ်ပါဘူး ရှုပ်လွန်းလို့။insurance ဆိုတာ
အရမ်းရှုပ်တာကလား။အဲ့ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ insurance adviser က ခဏ ခဏ pizza hut တို့ ဘာတို့
အစားကူပွန်လေးတွေ ပို့သဗျဒအဲ့လိုဆို ရင်တော့ဝမ်းသာအားရ သွားစားလိုက်တာပဲ။ဒီလိုနဲ့ သူပို့တဲ့
policy ကို ချောင်ထိုးလိုက် ကူပွန်လေးတွေ သွားစားလိုက်နဲ့ ၃ နှစ်လောက်ရှိလာပါရော..ကြားထဲမျာ
အဲ့ကောင်လေးက သူ့ customer care အနေနဲ့ နှစ်ကူးမှာ အိမ်ကို လက်ဆောင်လာပေးတာတို့ ကိုယ်
၀ယ်ထားတဲ့ ပလန် မှာ upgrade ထပ်လုပ်တာတို့ဆိုရင် အိမ်က်ု လာရှင်းပြတယ်။သူ့ကို သဘောကျ
တာက follow up လုပ်တာရယ် သူ တစ်ခြားပလန်တွေ ကိုယ်ဝယ်သင့်တယ်လို့၇ှင်းပြပေမယ့် ကိုယ်
မ၀ယ်ချင်ရင်လဲ အတင်း မရောင်းဘူး။
ဒီလိုနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်က ကိုယ့်ရဲ့ လျှာတွေ မှာ အနာတွေပေါက် အာတွေကွဲ နှုတ်ခမ်းတွေကွဲ
မစားနိုင် မသောက်နိုင်အထိဖြစ်ခဲ့တယ်။အစက အပူများလို့ဖြစ်တာ ထင်ပေမယ့် နောက်ပိုင်း ခဏ ခဏ
ဖြစ်လာတယ်။မျက်နှာ အရေခွံတွေကွာ နှုတ်ခမ်း ခရမ်းရောင်ပြောင်း လက်တွေ ထုံ ခေါင်းမှာ ယားနာ
တွေထွက် ဖြစ်လာရော...အိမ်နား ဆရာဝန်ဆီမှာ သွားပြတယ်...ခဏ ခဏဖြစ် တော့ အိမ်ကလူက
ဆရာဝန်ကို မေကြည့်ပါလား ဆိုလို့ ဆရာဝန်ကို ငါ ခဏ ခဏ ဖြစ်နေတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ အထူးကုနဲ့ပြစရာ
လိုလားဆိုတော့ မလိုဘူးတဲ့။ဒါနဲ့ တစ်ရက် အလုပ်က ပြန်လာတော့ ကိုယ်ပူ လည်ပင်းမှာ အကျိတ်ထွက်
လျှာတွေ အာတွေကလဲ ကွဲနေဆဲဆိုတော့ အရင်သွားနေကျဆေးခန်းကို မသွားပဲ နောက် ဆရာဝန်မ
တစ်ယောက်ထဲ သီးသန့် ထိုင်တဲ့ ဆေးခန်းကို ပြောင်းပြတယ်။အဲ့ဆေးခန်းကိုလဲ ၂ ပတ်တစ်ခါ လောက်
သွားရတယ်။သွားပြလိုက် ဆေးသောက်လိုက် ပျောက်လိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက် ချာလည်လည်ဖြစ်နေတော့
နောက်ဆုံး ဆရာမ က နင် အခုလို ခဏ ခဏ ဖြစ်နေတာ မကောင်းဘူး အထူးကုနဲ့ သွားပြသင့်တယ်
လို့ပြောတယ်။ကိုယ်က ပီအာဆိုတော့ ၂လမ်းရှိတယ် poly ကနေသွားမလား private နဲ့ သွားမလားပေါ့။
poly ကနေဆို သက်သာတယ် private ဆိုဈေးကြီးတယ်ပေါ့။ဒါနဲ့ အိမ်ကလူကိုမေးကြည့်တော့ private
နဲ့ပဲ သွားတဲ့ poly ဆိုကြာတယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ ဆရာမရေးပေးတဲ့ refer letter လေးကိုင်ပြီး သူညွှန်းတဲ့ အထူးကုဆီကို ချီတတ်ခဲ့တယ်။အထူးကုဆီ
ရောက်တော့ နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်း ကို scope ကြည့်တယ် မျက်နှာကို CT scan ရိုက်တယ်။ပြီးတော့
ရောဂွ အကြောင်းရှင်းပြတယ် ဆေး ၂ပတ်စာပေးတယ် ပြန်ချိန်းတယ်။၉၀၀ ကျော်ကျတယ်။ပိုက်ဆံပေး
တော့ မေးတယ် insurance ရှိလားတဲ့။ကိုယ်လဲ ၀ယ်တော့ ၀ယ်ထားတယ် ဒါ အကျုံးဝင် မ၀င်ဆိုတာ
မသိဘူး တို့ဝယ်ထားတာ hospitalization ပဲထင်တယ်ပြောတော့ သူတို့က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် insurance
form ဖြည့်ခဲ့ဆိုတော့ ဖြည့်ခဲ့တာပေါ့။စိတ်ထဲမတော့ ရမယ်မထင်ဘူး။ကိုယ်ပြတာလဲ private ဆေးခန်း။
ကြုံတုန်း ဒီက အထူးကုတွေများ လူနာကို ဘယ်လောက် careလုပ်လဲ လူနာ တစ်ယောက်ကို မီးနစ် ၃၀
ကနေ ၄၅ အထိ သေချာစစ်ဆေး ရှင်းပြ အရေးတယူပဲ။သူ့မှာ လူနာတွေ အများကြီးနေိာ။စမ်းသပ်ခက
First time က ၁၃၀...follow up ဆို ၉၀။၉၀၀ ကျော်ကျတာက scope,CT scan နဲ့ ဆေးဖိုးများတာ။
သူဆေးပေးထားတဲ့ ၂ ပတ်အတွင်းမှာ ဆေးသောက်နေရင်း ရောဂါ ကပိုဆိုးလာတယ် အကျိတ်တွေက
ထွက်လာတာ မပျောက်၊လျှာက ဘာအရသာမှကို မရတော့ပဲ အာခေါင်မှာလဲ အဖုတွေ ထပ်ထွက်
ချိန်ထားတဲ့ ၂ ပတ်ပြည့် ပြန်သွားပြတော့ ဆရာဝန်က ကိုယ့် အခြေနေကိုကြည့်ပြီး ဟာ နင်အခြေနေ
အတော်ဆိုးလာတာပဲ အကျိတ်တွေ အဲ့လို အကြာကြီး ထွက်နေတာ ငါမကြိုက်ဘူး။နင် insurance ရှိလား
ဆေးရုံတတ်လိုက်ပါ။ဆေးရုံတတ်လိုက် ငါ ၂ရက် ဆေးရုံမှာ treatment ပေးကြည့်မယ် မသက်သာရင်
ရက်ထပ်တိုးရမယ် နင့်အမျိုးသား ဖုံးနံပါတ်ပေး ငါဖုံးဆက်မယ်ဆိုပြီး အိမ်ကလူကို ဖုံးဆက်ပြီး ရောဂါ
အခြေနေက ဘယ်လို ဘယ်လို ပေါ့ ဆေရုံ တတ်သင့်တယ်ပေါ့ပြောတယ်။ပြီးတော့ insurance ကို
ဖုံးခေါ် ခိုင်းတယ် Mount Elizabeth Novena မှာ single room တတ်လို့ရလားမေးခိုင်းတာနဲ့ အဲ့
ကောင်လေး Randy ကို ဖုံးခေါ်တော့ ရတယ်ဆိုတာနဲ့ ဆေးခန်းက ဆေးရုံကို booking လုပ်ပေးတယ်။
ဒီဆရာဝန်ကပဲ သူရဲ့ inpatient အနေနဲ့ ဆက်ကုမှာဆိုတော့ private မှာပဲ တတ်ရတာပေါ့။အိမ်ကလူ
ကလဲ ပိုက်ဆံကို ပူမနေနဲ့ ဒီ insurance က cover မဖြစ်လဲ သူ့ကုမ္မဏီက family insurance ရှိသေးတယ်
ဘာမှ cover မဖြစ်လဲ ဖြစ်လာပြီ ဆိုမှ ကုရမှာပေါ့။တော်သေးတာက ကိုယ်တို့မှာ ကလေး ၂ယောက်ရှိ
တော့ တစ်ခုခု ဆိုရင် ဆိုပြီး saving money လေးထားထားလို့ပဲ။
ဆက်ပြောရရင် ဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်က ကိုယ့်အကျိတ်ကနေ တစ်သျှူးစထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ ထိုင်စောင့်
ရသေးတယ် အိမ်ကလူက ၅ နာရီမှ သဘောင်္ကျင်းကထွက်လို့ရမှာမလို့ ချက်ချင်း မလာနိုင်ပါဘူး။အဲ့အချိန်
မှာပဲ insurance ကောင်လေး randyက ဖုံးဆက်ပြီးရောက်ချလာပါတယ်။မင်းမင်း မရောက်သေးဘူးလား
မင်းမင်း လာတဲ့အထိ စောင့်ပေးမယ်ဆိုပြီး ဆေးခန်းမှာ တစ်သျှူ စထုတ်အပြီး ဆေးရုံသွားတဲ့အထိ
အိမ်ကလူ မလာသေးလို့ ဆေးရုံကိုလိုက်ပို့ အိမ်ကလူနဲ့ ဆေးရုံမှာတွေ admission အထိ လိုက်ပို့ပြီး
Mount Elizabeth Novena ကဟော်တယ်ကြီး အတိုင်းပဲ ဈေးကလဲ အော်နေတာ။တစ်နေ့ကို ရိုးရိုး
လူနာဆို single room ဆို အခန်းခနဲ့ ပြုစုခက SGD 2782 (ဆရာဝန်ခမပါ ဆေးဖိုးမပါ)။admission
ရောက်တော့ deposit တစ်ရက်စာပေးရတယ်။GE ကနေ insurance ၀ယ်ထားတာဆိုတော့ အဲ့ဖောင်
မှာ လက်မှတ်ထိုး medi save အတွက် လက်မှတ်ထိုး။officer က insurance claim ပြီးလို့ ပိုက်ဆံ
ပြန်ပေးရင် အကောင့်ထဲကို လွှဲပေးဖို့ bank account တောင်းတော့ ရီရတယ် လင်မယား ၂ယောက်စလုံး
ကိုယ့် bank account နံပါတ်တွေ အလွတ်မရဘူး။ဒါနဲ့ ချက် နဲ့ပဲ ယူမယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်။
အခန်းရ တော့ သူတို့လာခေါ်လိုက်သွား ဟိုရောက်တော့ ရှုးပေါက်ချင်လို့ အိမ်သာဝင်တော့ ကိုယ့်မှာ
အိမ်သာ ပါကင် အရင်ဖြည်ရသေးတယ်...
ဆေးရုံ စ၀င်တော့ ည ၈ နာရီလောက်ပေါ့။အဲ့ည တော့ ကိုယ့်အထူးကု ဆရာဝန်မလာတော့ဘူးထင်နေ
တာ(သူနဲ့ဆေးခန်းမှာ တွေ့ပြီးပီလေ) ည ၁ နာရိလောက်ကြီးရောက်ချလာပါလေရော။သူက တစ်ဆင့်
ထပ်လွှဲထားတဲ့ ID အထူးကု ဆရာဝန်လဲလာတယ်။သူတို့ ၂ယောက် ပူးပေါင်း အဖြေရှာမယ်ပေါ့။
ဘာကြောင့် ဒီရောဂါ ဒီလိုတွေ ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ..ကိုယ့် နား နှာခေါင်းလည်ချောင်း အထူးကုကတော့
သူနဲ့ ဆိုတဲ့ လည်ပင်းအကျိတ်ကို အဓိက ..ဟို ID ဆရာဝန်က Infectious Disease အဓိက....
လက်ကနေ ဆေးသွင်း ပြီး အကျိတ်ရောင်တာကို ၃ ရက်လောက် ချတယ် အကျိတ်က အရောင်မကျ
ဘူး။ကြားထဲမှာသွေး ၁၂ မျိုး စစ်တယ် ဆီးစစ်တယ်။အကျိတ်အရောင် မကျတော့ ဆရာဝန်က စိုးရိမ်
ပြီး neck,abdomen ကို CT scan ၇ိုက်တော့ အကျိတ်တွေဟာ ကြီးတဲ့ အတွက် ခွဲထုတ်ပြီး biosy
လုပ်သင့်တယ်လို့ အဖြေထွက်တယ်။အကျိတ်ကင်ဆာ ကို စိုးရိမ်ရတယ်ပေါ့။lymphoma ဖြစ်မှာ
စိုးရိမ်းတယ် ခွဲစစ်လိုက်တော အကောင်းဆုံးပဲ ဆိုတော့လည်း ခွဲပေါ့လည်းပင်း အကျိတ်လေးခွဲ
တာ ခဏလေး ဘယ်လောက်မှ မကြာဘူးပြောကြတာ...၈ နာရီ ခွဲခန်းထဲဝင် မေ့ဆေးပေး ၁၀နာရီခွဲ
Recover room ရောက် အခန်းထဲ ၁၁ နာရီမှ ပြန်ရောက်တယ်။recover room မှာကိုယ်သတိရတဲ့အထိ
ကိုယ့် နား နှာခေါင်းလည်ချောင်း အထူးကု(Dr Tan)ကိုယ်နားမှာ ရှိနေတုန်းပဲ။ကိုယ်သတိရမှပြန်သွားတာ။
အဲ့ဆေးရုံမှာနေတုန်း deposit လေး ပဲယူထားပြီး operation လုပ်တော့လဲ ပိုက်ဆံ ထပ်လာမတောင်းတော့
လင်မယား ၂ယောက် သို့လော သို့လောလဲ ဘယ်လောက် ကျလဲ မသိ insurance ကလဲ ဘယ်တော့မှပြန်
ရမယ်မသိ ဆေးရုံတတ်တာကလဲ ၄ ရက်လောက်ရှိပြီ ဆရာဝန်က ၂ရက်ပဲ တတ်ရမယ် estimate
၁၀၀၀၀ လောက် ကျမယ်ထင်တာ ၄ ရက်ဆိုတော့ ၂ သောင်းလောက်တော့ ကျမှာပေါ့ဆိုပြီး ပေးစရာ
credit card ကလဲ တစ်ကဒ်ထဲဆိုတော့ ၂သောင်းကို ပေးလို့ရမှာ မဟုတ်..ဆိုတော့ အိမ်ကလူက နေ့တိုင်း
ATM ကနေ ပိုက်ဆံ Limit ရသလောက်ထုတ် ဆေရုံက မီးခံ သေတ္တာထဲထည့်။မီးခံ သေတ္တာထဲထည့်တော့
ပြောရသေးတယ် စာရေးဆရာမနုနုရည်အင်းဝ ဘန်ကောက် ဟိုတယ်မှာ မီးခံသေတ္တာာထဲ ပိုက်ဆံ ထည့်သ
လိုဖြစ်နေအုံးမယ်လို့။ Net ကလဲ ၂၀၀၀ ပဲဖြတ်လို့ရတယ်တဲ့။
သွေးစစ်တဲ့ တစ်ချို့အဖြေတွေ မရသေးလို့ Dr Tan က နောက် ထပ် ၃ရက်လောက်နေစေချင်သေးပေမယ့်
မနေနိုင်တော့လို့ ၅ ရက်မြောက်မှာ ဆင်းချင်တယ် ဆရာ့ ဆေးခန်းမှာ လာတွေ့ပါမယ်ပြောတော့ ပေးဆင်း
တယ်။ အဲ့ အချိန်မှာ ရောဂါ ရဲ့ ၈၀ % လောက်သိရပါပြီ အကျိတ်ကို ကင်ဆာလား တီဘီလား စစ်ထားတာ
မသိရသေးတာက လွဲလို့ပေါ့။ဆေးရုံတတ်နေတုန်း randy လာတော့ ကိုယ့် insurance plan က
SGD 600,000 ထိ cover ဖြစ်ကြောင်း လာတွေ့ရင်းပြောပါတယ်။အိမ်ကလူ ရုံးက GM ကလဲ လာ
တွေ့ပြီး ကုပ္ပဏီ HR ကို ပြောထားကြောင်း Insurance claim ဖို့ စာရွက် စာတမ်းတွေ ယူလာပေးတယ်။
ဒါပေမယ့် randy က သူ့ GE ကနေ အရင် claim တာ မြန်ကြောင်း company ဖက်ကနေဆို နှေးမယ်
ဆိုလို့ company insurance ကို လစ်လျှူ ရှုလိုက်တယ်။randy ပြောတာကတော့ သူ့ GE က နောက်မှ
company insurance ဖက်ကို ပြန် claim မယ်...အဲ့အခါ ကျရင် ကိုယ်တို့ကို GE က gift voucher
ပေးမယ့် အပြင် ကိုယ့် Premium လဲ မရော့ တော့ ဘူးပေါ့တဲ့။
ဒါနဲ့ ဆေးရုံကဆင်းတော့ လင်မယား ၂ယောက် ပိုက်ဆံ ထုတ် ပိုက်ပြီး ရင်တထိတ်ထိတ် နဲ့ကောင်တာကို
ချီတတ် ခဲ့တယ်။အိမ်ကလူက ငါတို့ရဲ့ cash ကို လက်ခံပါ့မလားမသိဘူး.ထုတ်ထားတာလဲ ၅၀ တန်တွေ
ချည်းပဲ......ကောင်တာရောက်တော့ Insurance က SGD 10000 ကိုယ့်အတွက် တစ်သောင်း deposit
ကိုယ်က လောလောဆယ် 14391.37 ပေးရတယ်..ကိုယ့် medisave ကနေ 2801.72 ဖြတ်တယ်။
cash 11589.65 ထပ်ပေးရမှာ deposit 2782 ပေးထားတော့8807.65 ထပ်ပေးရတယ်။အောင်မလေး
ပျော်လိုက်တာ ကိုယ့်မှာ ၂ သောင်းကျော်လောက်ပေးရမယ်ထင်တာ....၃ ရက်နေ့ ဆေးရုံဆင်းတာ အဲ့
ပေးထားတဲ့ 11589.65 ဟာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ချက်နဲ့ အကုန်ပြန်ရတယ်။medisave ကိုလဲ top-upပြန်ထည့်
အဲ့ ချက်မတိုင်ခင် အရင်ပြထာတဲ့ ၉၀၀ ကျော်လဲ ချက်နဲ့ပဲပြန်ရတယ်။ဆေးရုံက ဆင်းပြီး ၂ရက်နေတော့
Dr Tan နဲ့ရော ID doctor နဲ့ရော appointment ရှိတော့ သွားရတယ်။ID doctor နဲ့ အရင်တွေ့ရတယ်
သူ့ဆီရောက်တော့ သွေးအဖြေတွေက အကုန်ရနေပြီး ဘာရောဂါလဲ ဆိုတော့ အတိအကျ သိနေပြီ
ID doctor က ရောဂါကို သေချာနားမလည်မှာစိုးလို့ သူ့အသိမြန်မာ ဆရာဝန် တစ်ယောက်ကို ဖုံခေါ်
ပေးပြီး ရှင်းပြတယ်။နောက်ပြီး သူနဲ့မဆိုင်တော့လို့ ကိုယ် ပြရမယ့် နောက် ဆရာဝန်ကို Dr Tan ဆီဖုံးဆက်
ပြီး ဘယ်သူနဲ့ လွဲပေးရင် ကောင်းမယ်ဆိုတာ တိုင်ပင်ပြီး လွဲစာရေးပေးတယ်..သေသေချာချာကို လုပ်
ပေးတာ။နောက်လွဲတဲ့ ဆရာဝန်ကိုလဲ သူတို့ပဲ appointment ယူပေးတယ်။၉၀ပေးရတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ Dr Tan နဲ့က ညနေမှ ပြရမှာဆိုတော့ ကိုယ့်ရောဂါကို အဓိက ကုမယ့် ဆရာဝန်မဆီကိုအရင်သွား
ပြရတယ်။သွေးထပ်စစ်တယ် ဆေး ၃ ပတ်စာ ပေးတယ်။1330 ကျတယ်။
ညနေကျတော့ Dr Tan နဲ့ သူခွဲထားတဲ့ လည်ပင်းက အနာ ကိုကြည့်တယ်။Result ကိုေ၊ပြာတယ်။ကင်ဆာ
မဟုတ်ဘူး။ကင်ဆာ မဟုတ်ပေမယ့် happy လုပ်လို့မရတဲ့ရောဂါ long treatment လုပ်ရမယ့်ရောဂါတဲ့။
ဒါဘာဆေး ဘာဆေး တွေ သောက်ရမယ်။အခုကိုင်မယ့် ဆရာဝန်မက ဘာဆေးတွေ ပေးထားလဲ မေး
လို့ ဟိုဆရာဝန်မပေးတဲ့ ဆေးတွေကို ပြ ဆေးဖိုးပါတဲ့ ဘောက်ချာ စာရွက်လေးပါ ပြလိုက်တောု 1330
ဆိုတာကို သူမြင်သွားတယ်။Dr Tan က ဟင် 1330 ကျ တာ နင်တို့ အဲ့ဆရာမက insuranceဘာမှ
မလုပ်ပေးဘူးလား နင်တို့ plan က outpatient အနေနဲ့ Claim လို့ရလား ဒီလို 1000 ကျော်ဆို မနက်
ဆေးရုံလာ ညနေ ဆေးယူပြန်ဆင်းပြီး insurance claim လို့ရတဲ့ဟာမျိုး။ကိုယ်တို့လည်း Outpatient
claim လို့ ရမရ မသေချာလို့ ဆရာမကို ဘာမှ မပြောခဲ့ကြောင်း ကိုယ့် Insurance အကြောင်းလဲ သေချာ
မသိကြောင်း ပြောတော့...နင်တို့ကို ငါ အကူအညီပေးလို့ရမလားတဲ့။ဟာ ရတယ် ပေးပါ ပေးပါ ဆိုပြီး
လင်မယား၂ယောက် တက်ညီ လက်ညီ ပြန်ဖြေတာပေါ့။ဒါဆို ငါ ID doctor ကို ဖုံးဆက်ပေးမယ်
ဒီဆရာဝန်မက သူ့အသိ ဆိုပြီး ID doctor ကို ကိုယ့်ရှေ့မှပဲ ဟေ့ ဒီလူနာက long treatmentနဲ့ သွားရ
မယ့်လူနာ 1300 ကျာ်ဆိုတာ သူတို့အတွက် too muchဖြစ်တယ် နင့်ဆရာဝန်မ ကို မေးပေး သူတို့
outpatient အနေနဲ့ insurance claim လို့မရရင် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့ ဒိနေ့ညနေ မတိုင်ခင် ပြန်ခေါ်
ဆိုပြီး ဖုံးဆက်ပေးတယ်။ကိုယ်တွေမှာ သူ့ကို ကျေးဇူး တင်လိုက်တာ။မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်တွေနဲ့ကွာ
တာ အဲ့ဒါပဲ ရောဂါတင် မဟုတ်ဘူး ငွေရေးကြေးရေးပါ အကုန် လိုက်ကြည့်ပေးတယ်။ကျေးဇူးတင်လိုက်
တာဆရာရယ် ဆိုတော့။ဒါ သူ့ဖက်က သူ့လူနာကို ကူညီ နိုင်သလောက် အစွမ်းကုန် ကူညီတာပါပဲတဲ့။
သူကူညီနိုင်တာ ဒါပဲ ရှိတာပါတဲ့။
သူ့ဆီက ပြန်လာတော့ လမ်းမှာ ကိုယ့်ရောဂါ ကိုင်တဲ့ ဆရာမဆီက ဖုံးဝင်လာပြန်ရော သူက Dr Tan
ကပြောလို့ insurance မလုပ်ပေးလိုက်ဘူးဆိုလို့။ကိုယ်တွေက insurance အကြောင်း ဘာမှ မပြောတော့
သူက outpatient အနေနဲ့ claim လို့ ရမယ်ထင်လို့ပါ။Insurance ကို မေးကြည့်ပါ တစ်ချို့ ပလန်တွေက
ဆေးရုံက ဆင်းပြီး ရက် ၁၂၀ ကို follow up treatments တွေ claim လို့ရတယ်။တစ်ချို့ကတော့မရဘူး။
တကယ်လို့ မရခဲ့ရင် သူ့ကို ဖုံးပြန်ခေါ် သူ Inpatient အနေနဲ့ claim ပေးလို့ရတယ်တဲ့ တောင်းတောင်း
ပန်ပန်ပြောရှာတယ်။ကိုယ်လဲ ဟာ ဆရာမ ကျေးဇူး ပါပဲပေါ့ claim လို့မရလဲ ပြသနာ မရှိဘူပေါ့..Dr Tan
က ငါ့ရောဂါ က long treatment ဆိုတော့ သူက စိုးရိမ်လို့ပါ ပြန်ပြောရတာပေါ့။
ဒါနဲ့ randy ကို ဖုံးခေါ်တော့ ကိုယ့် ပလန်က ဆေရုံ မတတ်ခင် ရက် ၁၂၀ နဲ့ တတ်ပြီး ရက် ၁၂၀ အတွင်း
ဘယ်ဆေးခန်းသွားသွား covered ဖြစ်တယ်တဲ့။ဟယ် အဲ့ဒါဆို ငါ ဆယ် ဆေးခန်းမှာ မှ insurance form
မဖြည့်ခဲ့ဘူး ဘယ်လို Claim ရမလဲ ဆိုတော့ မပူနဲ့ receipt တွေ အကုန်သိမ်းထား သူလာယူမယ်ဆိုပြီး
နောက်နေ့လာယူသွားလေ၇ဲ့။သူလာမှ ကိုယ့်ပလန်ကို သေချာမေးရတယ်။တစ်နှစ်အတွင်း ဆေါ်ရုံ တတ်
ချင်သလောက် တက် ၆ သိန်း မပြည့်မချင်း claim လို့ရတယ်။follow up ကတော့ ရက် ၁၂၀ ကျော်ရင်
ကိုယ့်ဘာသာပေးရတော့မယ်။ဒါပေမယ့် များရင် ဆရာမက inpatient အနေနဲ့ လုပ်ပေးမယ်တဲ့။
တော်သေးတာပေါ့ insurance ၀ယ်ထားမိလို့။၀ယ်သာဝယ်တာ ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိ အခုဖြစ်မှ
သေချာသိ...၀ယ်ထားတာ premium P Plus တဲ့...
လူကြီး Medisave 354+Cash 448
Posted by JuneOne at 7:52 AM
Anonymous August 23, 2014 at 11:43 AM
Ma ma ,thanks for your sharing...✌
Anonymous August 23, 2014 at 1:36 PM
အစ်မတို့ အသက်အာမခံ အေးဂျင့်က မြန်မာကောင်မလေး.. ဘာလက်ဆောင်မှ မလာဖူးပါဘူး.. :(
Anonymous August 23, 2014 at 1:51 PM
Thanksalot for sharing insurance plan experience.
I haven't buy insurance plan yet.
Btw, the new photo of Edwin and Lin Lin is so so cute.
Anonymous October 17, 2014 at 11:17 AM
Could you please share the agent's name and ph no?
i m looking for the agent who take care their coustmer.
The most agents don't care after sale services.
some feedback to me
(၂၀၁၈) ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှ အနုပညာရှင်များရဲ့ ပွဲတက်ဖက်ရှင်များ - (၂၀၁၈) ခုနှစ် အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို မတ်လ (၂၄) ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ရှိ Novotel Hotel မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကို တက်ရေ...
Russian Troops Have Landed In Venezuela! - (Staff article from The BREITBART NEWS on 24 March 2019.) Caracas (AFP) – A cargo plane bearing the Russian flag was spotted by AFP at the main airport in ...
ကိုသန်းလွင် ● ပြင်သစ်စာပေအကယ်ဒမီ - ကိုသန်းလွင် ● ပြင်သစ်စာပေအကယ်ဒမီ (မိုးမခ) မတ်လ ၂၅၊ ၂၀၁၉ (၁) စာရေးဆရာကြီး ဘလေ့စ် Balzac မှာဝင်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ဇိုလာက တံခါးကို အကြိမ် ...
Paleo Diet ဘာလဲ …. ဘာလဲ…….? - ၀ိတ်ချကြမယ်ဟေ့ ဆိုပြီး အင်တာနက်ပေါ်မှာ Diet Plan တွေ အကြောင်းတက်ရှာ ကြည့်မယ် ဆိုရင် အများကြီး တွေ့ရမှာပါဘဲ။ Keto, Paleo ဘာညာ ကွိကွ ဆိုပြီး တပုံတပင် ကြီးက...